Uchungechunge lweCummins Generator
I-Cummins Inc., umholi wamandla womhlaba wonke, iyinhlangano yamayunithi webhizinisi ahambisanayo aklama, akhiqize, asabalalise futhi asebenze izinjini nobuchwepheshe obuhlobene, kufaka phakathi amasistimu kaphethiloli, izilawuli, ukuphatha umoya, ukuhlunga, izixazululo zokuphuma kanye nezinhlelo zokukhiqiza amandla kagesi. Ikomkhulu layo eliseColumbus, eIndiana (eU.SA), iCummins ikhonza amakhasimende cishe emazweni namazwe ayi-190 ngenethiwekhi yezindawo ezingaphezu kuka-500 eziphethwe ngabanikazi bezinkampani nabazimele futhi cishe izindawo ezingama-5,200 zabathengisi.
Uchungechunge lwe-MTU Generator
IMTU ingomunye wabakhiqizi abahamba phambili emhlabeni bezinjini ezinkulu zikadizili nomlando wayo ongalandelwa emuva ngonyaka we-1909. Kanye neMTU Onsite Energy, iMTU ingenye yezimpawu ezihamba phambili zeMercedes-Benz Systems futhi ibilokhu ihamba phambili njalo inqubekela phambili kwezobuchwepheshe. I-MTU Engines iyimoto ekahle yokushayela amandla kagesi kadizili.
Ifaka ukusetshenziswa okuphansi kukaphethiloli, izinkathi ezide zensizakalo kanye nokukhishwa okuphansi, amasethi e-Sutech MTU edonsa udizili asetshenziswa kakhulu emkhakheni wezokuthutha, ezakhiweni, ngocingo, ezikoleni, ezibhedlela, emikhumbi, emasimini kawoyela nasendaweni enikezela amandla kagesi njll.
Uchungechunge lwePerkins Generator
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-80, i-UK Perkins ibe ngumhlinzeki ohamba phambili emhlabeni wezinjini ze-diesel negesi ezimakethe ze-4-2,000 kW (5-2,800 hp). Amandla okhiye kaPerkins yikhono lakhe lokwenza izinjini ngokunembile ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende, yingakho izixazululo zenjini yazo zithembwa ngabakhiqizi abahamba phambili abangaphezu kuka-1 000 ezimakethe zezimboni, ezokwakha, ezolimo, ukuphatha izinto kanye nezimakethe zokuphehla ugesi. Ukusekelwa komkhiqizo womhlaba wonke kaPerkins kunikezwa ukusatshalaliswa okungu-4,000, izingxenye nezikhungo zesevisi.
Uchungechunge lwe-SDEC Generator
IShanghai Diesel Engine Co., Ltd. (SDEC), neSAIC Motor Corporation Limited njengomninimasheya wayo oyinhloko, ibhizinisi elikhulu likahulumeni eliphakeme elenza ucwaningo nentuthuko nokwenziwa kwezinjini, izingxenye zezinjini namasethi e-generator, ane-a state-level technical center, isiteshi sokusebenzela esisebenza ngemuva, imigqa yokukhiqiza okuzenzakalelayo esezingeni lomhlaba kanye nohlelo lokuqinisekisa ikhwalithi oluhlangabezana namazinga ezimoto ezihamba. Eyokuqala yayiyiShanghai Diesel Engine Factory eyasungulwa ngo-1947 futhi yahlelwa kabusha yaba yinkampani ekwabelwana ngayo ngamasheya ngo-1993 ngamasheya ka-A no-B.
Uchungechunge lwe-Volvo Generator
Ukuqaphela kwemvelo yochungechunge lweVolvo Gen Setha ukukhishwa kwayo kokukhipha kuhambisana namazinga we-EURO II noma we-EURO III ne-EPA. Inikwe amandla yi-VOLVO PENTA injini edonsa ngodizili kagesi eyenziwe nge-Swedish VOLVO PENTA edume umhlaba wonke. Umkhiqizo we-VOLVO usungulwa ngo-1927. Isikhathi eside, uphawu lwawo oluqinile luhlotshaniswa namanani alo ayisisekelo amathathu: ikhwalithi, ukuphepha nokunakekelwa kwemvelo. T
Uchungechunge lwe-ZBW (XWB) lwezingxenyana ze-AC box-type zihlanganisa imishini yamandla kagesi ephezulu, ama-transformers, kanye nemishini kagesi ephansi yamandla kuqoqo eliphelele lamadivayisi okusabalalisa amandla, asetshenziswa ezakhiweni eziphakeme kakhulu zasemadolobheni, emadolobheni nasemaphandleni amabhilidi, izindawo zokuhlala, izindawo ezithuthukisa ubuchwepheshe obuphakeme, Izitshalo ezincane naphakathi nendawo, izimayini, izinkambu zikawoyela nezindawo zokwakha zesikhashana zisetshenziselwa ukwamukela nokusabalalisa amandla kagesi ohlelweni lokusabalalisa amandla.
IKhabhinethi Ye-GGD AC Low-Voltage Power Distribution
IKhabhinethi yokusabalalisa amandla kagesi we-GGD AC ilungele abasebenzisi bamandla njengezitshalo zamandla, iziteshi ezingezansi, amabhizinisi ezimboni nabanye abasebenzisi bamandla njenge-AC 50HZ, elinganiselwe amandla kagesi 380V, elinganiselwe njengamanje kuhlelo lokusabalalisa ugesi lwama-3150A njengamandla, imishini yokukhanyisa namandla okuguqula amandla , Ukusabalalisa nokulawula. Umkhiqizo unamandla amakhulu okuphuka, ulinganiswe isikhathi esifushane sokumelana namanje kuze kufike ku-50KAa, isikimu sesifunda esiguquguqukayo, inhlanganisela elula, ukusebenza ngokuqinile, kanye nesakhiwo senoveli.
Uhlobo lwe-MNS- (MLS) Type Low Voltage switchgear
Uhlobo lwe-MNS switchgear low-voltage (ngemuva kwalokhu obizwa ngokuthi yi-low-voltage switchgear) ngumkhiqizo inkampani yethu ewuhlanganisa nomkhuba wokuthuthuka we-switchgear yezwe lethu eliphansi, ithuthukisa ukukhethwa kwezakhi zayo zikagesi nokwakheka kwekhabethe, nokubhalisa kabusha Izici zikagesi nezomshini zomkhiqizo zihlangabezana ngokugcwele nezidingo zobuchwepheshe zomkhiqizo wokuqala we-MNS.
I-GCK, i-GCL ephansi ye-Voltage ekhishwa nge-switchgear
I-GCK, GCL series switchgear low-voltage switchgear yakhelwe yinkampani yethu ngokuya ngezidingo zabasebenzisi. Inezici zesakhiwo esithuthukile, ukubukeka okuhle, ukusebenza okuphezulu kagesi, izinga lokuvikela eliphakeme, ukuphepha nokwethenjelwa, nokunakekelwa okulula. Isetshenziselwa izimboni zensimbi, uphethiloli kanye namakhemikhali. Iyidivayisi ekahle yokusabalalisa ugesi yezinhlelo ezinamandla kagesi aphansi ezimbonini ezifana nogesi, imishini, izindwangu nokunye. Kubhalwe ohlwini njengomkhiqizo onconyelwe ukuguqulwa kwamanethiwekhi amabili kanye neqoqo lesishiyagalolunye lemikhiqizo yokonga amandla.